Mbola Tànam-polo Ihany No Anadiovan’Ireo Ambany Saranga Ao India Ny Tain’ny Olona, Na Eo Aza Ny Lalàna Mandràra Izany · Global Voices teny Malagasy
Mbola Tànam-polo Ihany No Anadiovan'Ireo Ambany Saranga Ao India Ny Tain'ny Olona, Na Eo Aza Ny Lalàna Mandràra Izany
Voadika ny 14 Mey 2016 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Nederlands, Español, русский, नेपाली, English
Voaràran'ny lalàna ao India ny fanadiovana loto amin'ny tànam-polo saingy mbola mitohy misy hatrany ny fampiharana izany. Ity vehivavy ity, tao amin'ny distrikan'i Moradabad ao Uttar Pradesh, dia miloloha tain'olona andeha ho ariana. Sary natolotry ny UNICEF India.
Vahoaka eo amin'ny iray lavitrisa eo, na 15 isanjaton'ny olona eto an-tany, no mampihatra ny fangerena an-kalamanjàna ary ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia ao India. Betsaka amin'ireo fomba fanao mahamenatra raha resaka fahadiovana ampiharin'ny ao India no misy ifandraisany lalina amin'ny rafitra fanavakavahana ara-tsaranga misy ao amin'ilay firenena. Noho ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa sahaza ho fanariana rano maloto, dia napetraka ho andraikitry ny Dalits, saranga ambany ao India, ny fanadiovana amin'ny tànam-polo (fanadiovana ny tain'ny olona amin'ny tànam-polo), ka nahazoan'izy ireo ny anarana hoe “ry tsy fikitika”. Taorian'ny taompolo maro nanaovana fanentanana sy nanatsaràna ny rafitra fidiovana/fandiovana, nolanian'ireo Indiana mpanao lalàna tamin'ny 2013 ny lalàna Fandranàna ny Fampiasàna ireo Mpandraoka loto amin'ny Tànam-polo sy ny Famerenana ny zony, amin'ny fametrahana ho heloka bevava ilay fomba fanao mampiasa olona hanadio amin'ny tànam-polony, hanary, na handray tay avy any anatin'ireo gabone namainina, ireo tatatra mitafo lanitra, na lavaka sy fivarinan-drano maloto.
Araka ny tatitra iray nataon'ny Kaomisiona Aziatika momba ny Zon'Olombelona tamin'ny 2015, anefa, maro amin'ireo trano any ambanivohitra ao India no mbola manakarama mpandraoka loto amin'ny tànana, mihevitra fa tsy misy ifandraisany amin'ny fahantràna ilay fomba fanao fa noho ny fanavakavahana iaretana noho ny resaka saranga.
Sanjay Kumar Chaudhary manoratra ao amin'ny Countercurrents:
Isan'ireo vondrom-piarahamonina tena ahilikilika sy araraotina indrindra amin'ireo Dalits ny olona mpandraoka loto amin'ny tànana. Izy ireo no heverina ho ambany indrindra amin'ny antanan-tohatry ny sarangan'ny Hindous ary, noho izany, ianjadian'ny endrika fanavakavahana isankarazany sy ny fanilikilihana ara-tsosialy, ataon'ireo Hindous sy ireo mpiasam-panjakana. Hita saiky amin'ny tanàna rehetra ao India izy ireo—mamafa làlana sy mikarama mitaona tany amin'ny alina. Ireo vehivavy avy amin'ìreny vondrom-piarahamonina ireny no tena voadona mafy indrindra satria manome ny valopolo isanjaton'ny hery mamokatra amin'ny fanaovana asa amin'ny tànana. Ankoatry ny henatra sosialy zakain'izy ireo, kely ihany koa ny karama omena azy. Ankoatra izay, miteraka olana ara-pahasalamana maro izany, ifanotofan'ireo otrikaretina mahery vaika isankarazany sy miparitaka be, ireo aretin-koditra, maso, ratra amin'ny tongotra, aretin'ny taova fisefoana ary ny aretin'ny tsinay ireo izay miasa amin'io.
Tatitra iray avy eny an-kianja novokarin'ny media iraisampirenena sy ny fikambanana mpiaro zon'olombelona Video Volunteers, no mamoaka hoe mitohy tsy mitsahatra ilay fomba fanao any Gujarat, izay teo aloha teo dia nambara fa afaka tamin'izany fandraofana maloto amin'ny tànana izany.
Ao anatin'ny lahatsary etsy ambony, avy amin'ny Video Volunteers, tanora telo mpandroaka maloto amin'ny tànana ao amin'ny Araben'i Surendranagar ao an-tanànan'i Dhangadra, any Gujarat, no hita mijoboka lalina ao anaty lavaka fivarinan-drano maloto, tsy misy fiarovana akory na kely aza: ny fonon-tànana anaovany, tsy misy saron-tava, na milina fiasàna. Tsy tonga saina akory izy ireo hoe ny Fiadidiana ny Tanànan'i Dhangadra, izay mpampiasa azy ireo anie, ka teren'ny lalàna hanome azy ireo fitaovana fiarovana sahaza.
Araka ilay tatitry ny Video Volunteers :
Rehefa naseho ho hitan'i Charuben Mori, lehiben'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Fiadidiana ny Tanànan'i Dhangadra, ny porofo hita maso, dia nolaviny ny hanaiky ny zavamisy sady nilaza izy fa “Tsy manohana na mampiroborobo fomba fanao tsy araka ny lalàna izahay, toy ny fampiasàna mpandroaka maloto amin'ny tànana.” Rehefa nanontaniana azy ny antony tsy ananan'ireo safai karmacharis fitaovana fiarovana sahaza, nolavin'i Mori ny handray ny andraikiny, fa naleony nanome tsiny ireo manana antoka asa aminy, tamin'ny filazàna hoe,
“Tsy mpiasanay izy ireo ka tsy hainay mihitsy araka izany izay mombamomba ny fepetra mahakasika ny asany. Olona manana antoka asa aminay no mampiasa azy ireo”. Mazava ny lalàna fa ny olona iray dia tsy afaka ampiasaina mivantana na ankolaka (ambany fifanarahana antoka asa) ary tsy misy fiarovana ho amin'ny fanadiovana maloto.
Nanomboka fanangonantsonia iray ireo mpikatroka mafàna fo hiantsoana ny governemantan'i Gujarat handray fepetra fanasaziana ireo manampahefana tomponandraikitra tamin'izany.